आगलागी हुनबाट जोगियो जिल्ला अस्पताल पाँचथर
२०७३ माघ १ शनिबार, पाँचथर । जिल्ला अस्पताल पाँचथर आगलागीबाट हुन बाट जोगिएको छ । अस्पताल परिषरमा फोहोर डढाउने क्रममा शनिबार साँझ भएको आगलागीले स्टोर रुमा पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको अस्ताल प्रशासनले जनाएको छ । स्टोर रुमा भएका काजातहरु र औषधीहरु त्था सामानहरु जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ । स्थानिय,नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको प्रयासमा आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको थियो । आगलागी बाट भएको क्षतिको विवरण भने आउँन वाँकी ... बाँकी अंश»
उपत्यकाको तापक्रम घट्यो, जाडो अझै बढ्ने
२०७३ माघ १ शनिबार, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित आसपासका क्षेत्रको न्यूनतम तापक्रम शून्यमा झरेपछि शनिबार अत्यन्तै जाडो महसुस गरिएको छ । एक्कासि तापक्रम घटेपछि उपत्यकामा चिसो बढ्नुका साथै केही स्थानमा तुसारोसमेत परेको छ । न्यूनतम तापक्रम घटेकाले शनिबार यो वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । शनिबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ०.४ डिग्रीसेल्सियस रहेको छ, भने अधिकतम तापक्रम १६ डिग्रीसेल्सियस रहेको छ । अघिल्लो वर्ष पुस ८ गते वर्षकै क ... बाँकी अंश»
हात्तीले उधुम मच्चाएपछि पिडित उत्रिए बन्द गर्न
२०७३ माघ १ शनिबार, रत्ननगर (चितवन)। दक्षिण चितवनको माडीमा हात्तीले उधुम मच्चाएपछि वन्यजन्तुको आक्रमण नियन्त्रणको माग गर्दै स्थानीयले शनिबार यातायात बन्द गराएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जङ्गली जनावर बस्तीमा पसेर जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको भन्दै स्थानीयले वन्यजन्तु नियन्त्रणको माग गर्दै शनिबार यातायात बन्द गरेका हुन् । बन्दका कारण माडीका सवारी साधन रोकिएका छन् । शुक्रबार चितवन निकुञ्जबाट बस्तीमा ... बाँकी अंश»
प्रेस काउन्सिलका सबैले ३ दिनभित्र राजीनामा नदिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी
२०७३ माघ १ शनिबार, काठमाडौ । प्रेस काउन्सिलले गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आन्दोलनको घोषणा भएको छ । उनीहरुले आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रेस काउन्सिलका सबै सदस्य तथा अध्यक्षलाई ३ दिनभित्र राजीनामा दिन समय दिएको छ । भेदभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समिति नामबाट सुरु भएको आन्दोलनकारीहरुले ३ दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने भनेर ३ वटा माग अघि सारेको छ । यस्ता मागहरुमा राजीनामाका अतिरिक्त भेदभावपूर्ण वर्गीकरण खारेजी र सबै काउन्सिलका ... बाँकी अंश»
भारतीय दुतावासको सम्पर्क कार्यालय हटाउन माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन
२०७३ माघ १ शनिबार, विराटनगर । विराटनगर–१८ मलाया रोडमा रहेको भारतीय दुतावासको सम्पर्क कार्यालय हटाउन माग गर्दै क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसाल, नेकपा माओवादीले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन् । क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा मसाल र नेकपा माओवादीका पाँच सय बढी कार्यकर्ताले मलाया रोडमा रहेको भारतीय दुतावासको सम्पर्क कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरेका हुन् । कोण सभामा क्रान्तिकारी माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई भुटानीकरण र सीक्क ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ १ शनिबार, काठमाडौँ । प्रहरीले रु चार करोड २६ लाख बराबरको विदेशी रुपैयाँसहित तीन चिनियाँ नागरिकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरेको छ । महानगरिय अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले बा १ ञ १२३२ नं को पर्यटक स्कारपियो गाडीबाट दुई महिला र एक पुरुष चिनियाँ नागरिकका साथै सो गाडीको नेपाली चालकलाई नागढुङ्गाबाट पक्राउ गरेको हो । उनीहरुको साथबाट दुई लाख ६० हजार अमेरिकी डलर, एक लाख १८ हजार युरो, केही मात्रामा अस्ट्रेलियन डलर, स्विस डलर र जापानी ऐनसमेत बरामद गरेको महाशाखाक ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग शनिबार को–को जाँदै छन् अरब ?
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, काठमाडौ‌ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘ शनिबार संयुक्त अरब इमिरेट युएईको अवुधावी जाँदै छन् । ‘वल्ड फ्युचर इनर्जी समिट, २०१७ को विशेष वक्ताका रुपमा सहभागी हुन १० सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल युएर्इको राजधानी अवुधावी जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई युएर्इका उपराष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्री मोहम्मद विन रसिद मोक्तुमले विशेष निमन्त्रणा दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । प्रधा ... बाँकी अंश»
न्यायाधीश सिफारिस : म ‘सत्य’ हेरुँ कि नहेरुँ श्रीमान् !
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, काठमाडौं । संविधानको धारा १५३ बाट पूर्णता पाएको न्यायपरिषद्ले गरेको उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन र पेशागत संगठनमात्र नभई राजनीतिक दल र जनस्तरबाटै निर्णयको विरोध भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र न्यायपरिषद् ऐनकै उपहास गरेको टिप्पणी भइरहेका बेला अलोकतान्त्रिक निर्णय भएको भन्दै पत्रकारले समेत निर्णयबारे असुतुष्टी राखेका छन् । पत्रकार वसन्त प्रकाश उपाध्यायले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा यसाे लेख ... बाँकी अंश»
चोरीको गिरोह नै पक्रन सफल भयौ : एसएसपी अधिकारी
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, ललितपुर । ललितपुर जिल्लाको ताल्छिखेल स्थित साउनको अन्तिममा रातको समयमा सनम महर्जनले संचालन गरेको ईन्स्पायोरेन्स ईलेक्ट्रोनिक्स नामक पसलबाट सटरको ताला फुटाएर टिभि, मोबाइलहरु र नगद समेत गरी झन्डै ७ लाख बराबरको धनमाल चोरी गरेको आरोपमा सामान सहित उत्तम लामा बोम्जन सहितको गिरोहलाई ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धानको क्रममा शेर बहादुर भन्ने सार्की माझी , सुमित लामा, सुजन भँन्ने अश्विन कुमार दाहाल समेतको संलग्नता देखिए ... बाँकी अंश»
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वैद्यनाथलाई गरिन् विदाई
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाएका छन् । उपाध्यायले उमेर हदका कारण शुक्रबाट अवकाश पाएका हुन् । सर्वोच्चले उपाध्यायको विदाई गरेको छ । विदाई कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले माया चिनो दिँदै न्यायाधीश उपाध्यायलाई विदाई गरिन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारीले फूलमाला लगाएर विदाइ गरे । विदाइमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाश पछिको जीवन सुखमय रहोस् भनिन् । आवश्यक परेका बेलामा आफ ... बाँकी अंश»
विधेयक संसद्बाट पारित हुदैन : नेता खनाल
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, विराटनगर। नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान सशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै एमालेसँग एक तिहाइभन्दा बढी सांसद रहेकाले सो विधेयक संसद्बाट पारित नहुने स्पष्ट पारेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले निर्वाचन गर्नमा ढिला गरिए मुलुक सङ्कटमा पर्ने सम्भावना रहेको बताए । नेता खनालले सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेर कुबेलाको बाजा बजाइरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले ... बाँकी अंश»
मधेसका मागलाई लिएर एमालेले राष्ट्रियता माथि प्रहार : मन्त्री लेखक
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, वीरगंज । भौतिक पूर्वधार तथा यातयात मन्त्री रमेश लेखकले मधेसका मागलाई लिएर एमालेले राष्ट्रियता माथि प्रहार गर्नु विखण्डनवादी सोच भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार बाराको बहुअरीमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका मन्त्री लेखकले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुरुप जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभियानमा कांग्रेस लागेको बताए । मन्त्री लेखकले नेपाली कांग्रेस मधेसबाटै ज ... बाँकी अंश»
प्रदेश अखण्ड आन्दोलनमा सहभागी हुन चन्द्र भण्डारीको आग्रह
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, कपिलवस्तु । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा साँसद चन्द्र भण्डारीले ५ नम्बर प्रदेश अखण्ड राख्न तराई पहाडका सवै जनता आन्दोलनमा सहभागी हुन आवहन गरेका छन । उनले कपिलवस्तुको चारनम्बरमा संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको विरोध सभामा उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । सो अवसरमा बोल्दै नेता भण्डारीले बुद्धको प्रदेशका शान्त जनता प्रदेश टुक्रिने बिषयमा भने आन्दोलित हुनुपर्ने र आन्दोलनमा सहभागी हुन नेपाली कागे्रसको निर्णय नचाहिने बताए । ... बाँकी अंश»
सावधान तपार्इँकाे गल्ती आकाशबाट हेरिरहेकाे हुन्छ ट्राफिक प्रहरीले
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यले ड्रोनको माध्यमबाट गल्तीको निगरानी गर्ने भएको छ । एनएमबी बैंकले दिएको ड्रोन बुझ्दै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यसले चालकहरुको लापरबाही कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा पनि राखेको छ । शुक्रबार बैंकले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई मानवरहित हवाई विमान ९ड्रोन० प्रदान गरेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र पौडेलले ... बाँकी अंश»
ढुङ्गाकै सहारा लिन्छन् महाकाली पारीका जनता
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली पारी कुतियाकबरका स्थानीय बासिन्दा जोगबुढा नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गाकै भरमा लिएर आवत–जावत गर्न बाध्य भएका छन् । दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१० मा पर्ने जोगबुढामा पक्की पुल नहुँदा कुतियाकबरका स्थानीयहरु दैनिक आवतजावतमा ढुङ्गाकै साहरा लिन बाध्य भएका हुन् । महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि नेपालको भू–भागसँग जोडिएका दोधाराचाँदनीका स्थानीय जोगबुढा नदीमा पक्की पुल नहुँदा बर्षैभरी सास्ती खेपिरह ... बाँकी अंश»
साझा यातायात चढ्दा अब छुटैछुट, कुन रुटमा कति छुट (सूचीसहित)
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, काठमाडौँ । साझा यातायातले सेवाग्राहीहरुलाई आफ्नो सेवामा भारी छुट दिएको छ । यात्रुहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै साझाले आफूले सञ्चालन गरेको बसहरुमा एक सय रुपैयाँ सम्म छुट दिने तयारी गरेको यातायातले जनाएको छ । उसले लामो दुरीमा चल्ने गाडीमा २० प्रतिशत छुट दिने गरेको हो । शनिबारदेखि लागू हुने गरी ल्याईएको यो योजनामा साझाले उपत्यका बाहिरका काठमौँबाट– वीरगन्ज, भैरहवा र पोखरा बागलुङ रुटमा चल्ने गाडीमा रु २० प्रतिशत भाडा घटाएको हो । साझ ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्रीकै अगाडि न्यायाधीश सिफारिसकाे विरोध, कानुनको खिल्ली उडाइयो : मोर्चा
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगै मोर्चाका नेताहरुले संविधान र कानुन विपरीत गरिएको सिफारिस मान्य नहुने बताए । बैठकमा सहभागि तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले आफुहरुले ८० जना न्यायाधीशको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै यसमा हेरफेर नभए मान्य नहुने बताएको जानकारी दिए । न् ... बाँकी अंश»
सिमल तरुल बेचेर सय मन धान किन्ने तामाङ समुदायको रहर
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, पथरी (मोरङ)। मोरङको पथरीशनिश्चरे–१२ का धनबहादुर तामाङलाई माघे सङ्क्रान्ति आउनै लाग्दा सिमल तरुल बेच्न भ्याइनभ्याई छ । सिँचाइ नहुने एक बिघा पाखोबारी लिजमा लिएर व्यावसायिक रुपमा सिमल तरुलको खेती लगाएका छन् । उनका अनुसार माघे सङ्क्रान्तिमा तरुलको माग थेग्न नसक्ने हुन्छ । तरुलको उच्च माग हुने बेलामा आफ्नो उत्पादन सकिने उहाँको भनाइ छ । चार वर्षयता निरन्तर तरुल खेती गरिरहेका भण्डारीले खेती लगाएको पहिलो वर्ष (२०७०) साल मा रु एक लाख ५५ हजारको तरु ... बाँकी अंश»
विवादबीच उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति, रातारात निर्णय भएको खुलासा
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, काठमाडौं । न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्त गरेको खुलेको छ । यस सम्बन्धमा औपचारिक पुष्टि भने हुन बाँकी छ । उच्च न्यायालयमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरुको गएराति अबेर नियुक्ति गरिएको दावी न्यायपरिषद स्रोतले गरेको छ । यद्यपि, नियुक्तिका सम्बन्धमा न्यायपरिषद सदस्यहरुमा मत विभाजन भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार दिउँसो बसेको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएपछि राति अबे ... बाँकी अंश»
२०७३ पौष २९ शुक्रबार, उर्लाबारी । झापाको दमक–१६ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बिहीबार राति मोटरसाइकल आफैँ अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा उर्लाबारी–४ का गौरव श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ । राति १०ः१५ बजे दमकबाट उर्लाबारीतर्फ आउँदै गरेको को १० प ४६४३ नंको मोटरसाइकल आफैँ अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक २१ वर्षीय श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका श्रेष्ठको दमकस्थित लाइफलाइन अस्पतालमा उपचारका क्रममा राति १०ः३५ बजे म ... बाँकी अंश»